ဝမ်တိန်အသွားလမ်းကို ခံစား၊ ဝေဖန်ခြင်း (ရွှေအမြုတေ/ မေလ- ၂၀၁၇)
"ဝမ်တိန်အသွားလမ်း" အမည်နဲ့ မြန်မာပြန်လိုက်တဲ့
"ဘာသာပြန်သူဟာ အမှားပေါင်း ၂၀၀
လောက် မှားထားတယ်"လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီဆောင်းပါးကို ဖတ်မိတော့မှ
"ဟ... ဘယ်လို ဖြစ်တာပါလိမ့်" ဆိုပြီး
မြန်မာ့စာနယ်ဇင်းလောကမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ "နေးရှင်းသတင်းစာ တည်ထောင်သူ
ဦးလောရုံ"ရဲ့ သမီး ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးလေးကိုယ်တိုင်က မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဝေးလံခေါင်ခိုက်သော ဒေသမှ အီကော၊ မြောင်၊ ဝ၊ လီဆူး၊ ဓနု ... စတဲ့ လူမျိုးစုတွေထဲကမှ
"လု" ဆိုတဲ့ သေးငယ်သော လူမျိုးစုကလေးထဲက ဖြစ်ပါတယ်။
(ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်က "ဆောင်ကြာမြိုင်" လို့ ဘာသာပြန်တဲ့) ထဲကို
"ရသ ဝတ္ထုဆိုတာတွေကို ဖတ်ရင်
ပျိုမေကလေးတွေအတွက် ဖတ်ကြည့်ပြီး "မှတ်" "သိ"ထားသင့်တဲ့ စာအုပ်လို့တောင် ဆိုရမလိုပါပဲ။
ဥပမာ (စာမျက်နှာ ၁၅၄) ".... သူမသည် ထိုင်း မိဖုရား။ တောက်ပနေသော အပြုံး၊ အရောင်စိုနေသော ကေသာ၊ ရတနာ
စီခြယ်ထားသော စိမ်းပြာရောင် ပိုးထည်...သီရိကျက်သရေနှင့် ပြည့်စုံသော မိဖုရား သီရိခေတ်။" သူမသည် ထိုင်းမိဖုရား ဆိုတာရဲ့ နောက်မှာ
"ဖြစ်သည်" တို့၊ "ဖြစ်၏"တို့ ဆက် မရေး၊ ဝါကျကို တုံးတိတိ ဖြတ်ချခဲ့ပြီး ဗြုန်းခနဲ နောက် ဝါကျတစ်ကြောင်း ဆက်ရေးပါတယ်။ အဲဒီလို ဝါကျ
ဥပမာ (စာမျက်နှာ ၂၅၉- ပထမဆုံးအပိုဒ်)မှာ ... "စတုဂံပုံ အာရုံခံတန်ဆောင်းကို ထောက်ပင့်ထားသော သစ်သားယက်မများ ခြလည်းမစား၊
ဆေးသားရောင် ကြိုးကြွနေဆဲ။ (မူရင်းစာသား "The timber beams supporting the rectangular hall show no sign of termite damage or decay.
And the grimacing demons up on the walls and ceilings are vivid and fresh with purple, red, blue and gold paint.")
အဲဒီ စာပိုဒ်ကို ကြည့်ပါ။ စကားလုံးတွေက ကျစ်နေတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးမှာ ပါနေတဲ့ "ဆေးသားရောင် ကြိုးကြွနေဆဲ" ဆိုတာမှာ "ကြိုးကြွ" ကို
ကျွန်တော်တို့ ပြောစရာ ရှိပါတယ်။ "ကြွကြွရွရွ ရှိနေဆဲ" ဒါမှမဟုတ် "ကြွတက်နေဆဲ" စသည်ဖြင့် သုံးမယ်ဆိုရင် ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ "ကြိုးကြွ"လို့
စာမျက်နှာ ၃၄၃ ရဲ့ နောက်ဆုံး စာကြောင်းမှာ "နယ်သတ်လိုင်းကို ကျော်သည်"လို့ ရေးထားပါတယ်။ သူသူကိုယ်ကိုယ်တွေက "နယ်ခြားစည်း"လို့
ဘာသာပြန်မှာ ဖြစ်ပေမဲ့ ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့်ကတော့ "နယ်သတ်လိုင်း" လို့ သုံးထားပါတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ စာမျက်နှာ ၁၈၀ မှာ "မင်ဇူသည် ရေထွက်မတတ် လာနေ..." လို့ ရေးထားပါတယ်။ "ချောင်းပေါက်မတတ်"ဆိုတဲ့
မြန်မာစကား အသုံးကို ရှောင်ပြီး "ရေထွက်မတတ်" လို့ သုံးထားတာကို ရှုစားပါ။
စာမျက်နှာ ၆ မှာ - ledge ကို ဆရာမ ဝင့်ပြုံးမြင့် ဘာသာပြန်တာ မှားတယ် ကျွန်တော်လည်း ထင်ပါတယ်။ ဘောင်လည်း မဟုတ်၊
စာမျက်နှာ ၁၄ မှာ - မူရင်း He is known as Prince of Yunnan. ကို "ယူနန်မင်းသားလို့ နာမည်ကြီးတယ်" ဘာသာ ပြန်တာကို
စာမျက်နှာ ၄၃ - gas station ဆိုတာ US အခေါ်နဲ့ ဆိုရင် ဓာတ်ဆီဆိုင်ပါ။ UK ဆိုရင် ဂက်စ်ဆိုင်လို့ မှတ်သားဖူးပါတယ်။ gas station ကို
စာမျက်နှာ ၄၉ - rafter ဆိုတာကို အဘိဓာန်ထဲ ပြန်ရှာတော့ ဒိုင်းလို့ တွေ့ပါတယ်။ ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့်က "ခေါင်လျောက်ပေါ်မှ တောက်တဲ့ကြီး"လို့
ဘာသာပြန်ထားပါတယ်။ ဇာတ်ကြောင်းနဲ့ လိုက်ဖက်ညီအောင် ဘာသာပြန်ရင်းနဲ့ မြန်မာမှု "အပြုလွန်"သွားတယ်ထင်ပါတယ်။
စာမျက်နှာ ၇၀ - flies ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို "ပလူကောင်"ဆိုပြီး ပြန်ထားတဲ့ ကိစ္စကတော့ ပြင်လက်စ အချောမသတ်မိတဲ့ စာမျက်နှာကြီး
စာမျက်နှာ ၈၀ - မူရင်းစာသား But to pray for the happiness of all beings - mosquito and worm and man alike -
was this the most hopeless plea? ကို ဘာသာပြန်ထားတာက - "သို့ရာတွင် ခြင် ၊ လောက်လန်း၊ လူသား စသော ခပ်သိမ်းသတ္တ၀ါတို့၏
ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲဖို့ ဆိုသည်မှာ မျှော်လင့်ချက် လုံးဝ မရှိဆုံး အသနားခံမှု မဟုတ်ပေဘူးလော။" တဲ့။ လောက်လန်းနဲ့ တီကောင်လောက်
စာမျက်နှာ (၉၉) မူရင်းက - Next came the noodles: fat noodles, thin noodles, fried noodles, crisp noodles, noodles in broths
ဘာသာပြန်ထားတာက - ဆန်ပြုတ်ပြီးလျှင် ခေါက်ဆွဲ။ ခေါက်ဆွဲ တုတ်တုတ်၊ ညှပ်ခေါက်ဆွဲ၊ ခေါက်ဆွဲတွန့်၊ ခေါက်ဆွဲကြော်၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်နှင့်
၀က်အူချောင်းနှင့် အမဲသားပေါက်စီ။ ပြီးလျှင် မုန့်ပွဲ၊ မုန့်နီ၊ မုန့်ပွ၊ ဆန်မုန့်၊ ရေခဲစိမ်မုန့် နှင့် --- လမုန့်။
စာမျက်နှာ (၉၉) မူရင်း - trays heaped with scrambled eggs, fried eggs, boiled eggs, egg pies and omelettes:
with sausages the size of cat turds and glassy bacon strips steeped in grease; ကို ဘာသာပြန်ထားတာက - "လင်ပန်းများထဲတွင်
၀က်ပေါင်သားများ။" အဲဒီမှာလည်း "အနာ"လုပ်ရလောက်တဲ့ "ဖြုတ်ပေါင်ကြား" မတွေ့ပါ။
စာမျက်နှာ ၁၁၀ မှာ - shore ကို ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့်က "ကန်ခြေ"လို့ ဘာသာပြန်ထားတယ်။ shore ကို အဘိဓာန်ထဲ ကြည့်ရင် ကမ်းခြေ၊
ကန်အခြေမို့ "ကန်ခြေ"လို့ ရေးတာ သိသာပါတယ်။ ဘာလို့များ "ကမ်းစပ်"လို့အတိအကျ မလွဲမသွေ ဘာသာပြန်ရမှာတုန်း၊ ဘာသာပြန်သူ သင့်တော်မယ်
စာမျက်နှာ ၂၂၁ - moped ကို စက်တပ် စက်ဘီးလို့ ရေးရင်လည်း ရသလို၊ မရေးဘဲ စက်တပ် ခြေနင်းဘီး ရေးတာ။ စက်တပ် အနှေးယာဉ်လို့
စာမျက်နှာ ၂၇၅ - အမွေးနံ့သာခွက်နဲ့ အမွှေးတိုင်ခွက်ကိုတောင် တိမ်းစောင်းပြီး ဘာသာပြန်ခွင့်၊ အားထုတ်ခွင့် မပေးချင်တဲ့ ဆရာဥာဏ်ရဲ့
စာမျက်နှာ ၂၇၄ - spirit house ကို "နတ်စင်" လို့ မရေးဘဲ ဗုဒ္ဓ ရုပ်ပွားတော် ထားတဲ့ အခန်းထဲမှာမို့ "ဘုရားကျောင်းဆောင်"ပဲ
chain around his neck ကို "လည်ပင်းချိန်းကြိုး"လို့ ဘာသာပြန်တာလဲ မမှားဘူး ထင်ပါတယ်။ "ဆွဲကြိုး"ဆိုပြီး ဘာသာပြန်မိမှ
side arm ဆိုတာ သေနတ်၊ ဗြောက် ဆိုပြီး အတိအကျ ပြောလို့ မရဘူးထင်ပါတယ်။ ခါးမှာ ထိုးထားတဲ့ သေနတ်၊ ဓားမြောင်...
အကုန်ပါနေတာကြောင့် "အပိုဆောင်လက်နက်"လို့ ဘာသာပြန်ထားတာကိုလည်း မှားတယ်တော့ မထင်။
checker ကို "ချက်ကာထိုးတယ်"လို့ပဲ ပြန်ခဲ့တာ တွေ့ပါတယ်။ "ကျားကစားတယ်"၊ "ကျားထိုးတယ်" လို့ ဘာသာပြန်ရင် ပိုသင့်လျော်မှာကိုတော့
crescent roll ကို ဘာသာပြန်ရာမှာ လခြမ်းပုံစံလေး ဖြစ်နေတာနဲ့ "လခြမ်းလိပ်"ရေးထားတာထင်ပါတယ်။ iced cake ဆိုတာ အိုက်စကရင်၊ ရေခဲမုန့်
မဟုတ်တာ သေချာပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ "ရေခဲစိမ်မုန့်၊ ရေခဲကိတ်" လို့ ဘာသာပြန်ထားတာ ဘာများ ဆိုးနေလဲလို့ မေးချင်လာပါတယ်။
မဖြစ်စလောက် အလွဲအချော်လေးတွေကို ဖြုတ်ပေါင်လေး ဖြဲပြီး "အနာ"ရယ်လို့ ရေးကြီးခွင်ကျယ် လုပ်ကြတဲ့ ကိစ္စကို တုံ့ပြန်တာ ဒီမှာတင်
ဝေဖန်ရေးသမားဟာ အနုပညာရှင်ရဲ့ အားထုတ်မှုလက်ရာ (အနုပညာပစ္စည်း)ကို "ကောင်း/ဆိုး နှစ်တန်လုံး" ခွဲခြား၊ သတ်မှတ်ပြီး
ကြောင်းကျိုး ညီညွတ်စွာ ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသင့်တယ်လို့ ကျွန်တော် ယူဆပါတယ်။ ကောင်းရင် ကောင်းတယ်၊ မကောင်းရင် မကောင်းဘူး။ သို့သော်...
ဆွေးနွေးစရာကို ကိုယ့်ဆန္ဒသဘောထားနဲ့ကိုယ် မကောင်းဘူးဆိုတဲ့အထဲ ပြီးစလွယ် ထိုးထည့်ခြင်းတွေ...မလုပ်သင့်ပါ။ ဝေဖန်ရေးသမားကောင်း
တစ်ယောက် လိုက်နာ စောင့်ထိန်းသင့်တဲ့ "ဝေဖန်ရေးသမားကျင့်ဝတ်တွေ"ကို မျက်ကွယ် မပြုသင့်ပါ။
ကောင်းတယ် ဆိုးတယ်... တစ်ဖက်သတ် သတ်မှတ်ခွင့် မရှိသင့်ပါကြောင်းနဲ့၊ အရှိကို အရှိအတိုင်း ဓမ္မဓိဌာန်ကျစွာ ဝေဖန်ချိန်ထိုး ပြနိုင်ရမယ် ဖြစ်ပါကြောင်း။
ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့်ရဲ့ ဘာသာပြန်လက်ရာ "အနုပညာမြောက်တဲ့ စကားလုံးတွေ"ကို ကျွန်တော် ကောက်နှုတ်ပြပြီး မူရင်းရေးသူကိုရော၊
ဆရာဥာဏ်သစ်က "ဆရာမဝင့်ပြုံးမြင့် ဘာသာပြန်တဲ့ ဝမ်တိန်အသွားလမ်း စာအုပ်ကို ဖတ်ရတာဟာ သားကောင်း ငါးကောင်းကို တော်သလို
လျော်သလို ချက်ထားတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက် စားရသလိုပဲ"လို့ ဆိုပါတယ်။
ချက်တဲ့သူအပေါ်မှာချည်း မူတည်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ စားတဲ့သူရဲ့ "လျှာရိုးရာ၊ လျှာဓလေ့နဲ့ မကြိုက်/အကြိုက် စိတ်ခံစားမှု"ပေါ်မှာလည်း
မူတည်ပါသေးတယ်။ အငံကြိုက်တဲ့သူက ဆားပေါ့တဲ့ ဟင်းတစ်ခွက်ကို စားမိတဲ့အခါ "စားရတာ အရသာ မရှိဘူး"လို့ ဆိုမှာပါပဲ။ အနေတော်
ဆိုတော့... ဘာသာပြန်စာအုပ်ဆိုရင် စာလုံး တစ်လုံးချင်းစီကို လုံးကောက်အတိုင်း အတိအကျ (အတိအကျရယ်မှ ပက်ပက်စက်စက် အတိအကျ)
ဘာသာပြန်တာကိုမှ ဖတ်ချင်တဲ့သူအတွက်တော့... စကားလုံး အထားအသိုကို ဖန်တီးသူ စိတ်ကူးသင့်သလို ကွန့်ကာညွန့်ကာ ရေးဖွဲ့ ပြန်ဆိုထားတဲ့
ဒီစာအုပ်ကို "စိတ်ခံတွင်း" မတွေ့တာ မဆန်းပါဘူး။
မတ်လ၊ ၂၀၁၇/ ရွှေအမြုတေ